ब्रोन्कियल अस्थमा - एक बरु जटिल रोग विभिन्न कारणहरूले गर्दा हुन्छ र कुनै पनि उमेर मा पूर्ण हुन सक्छ। अस्थमा लागि आहार चिकित्सकीय विधि हुन सक्छ, तर यो रोग स्थिर र पुनरावृत्ति रोक्न मद्दत गर्छ।
धेरै डाक्टर विरामीहरु एक व्यक्ति एक एलर्जी प्रतिक्रिया सक्छ कि खाद्य पदार्थ हटाइ द्वारा सामान्य आहार पालन सुझाव। सख्त hypoallergenic आहार अनुगमन गर्नुपर्छ मात्र तीव्र रोग को अवधिमा। एक निश्चित उत्पादन एक खाद्य एलर्जी सुनेपछि छ भने, तपाईं यसलाई तुरुन्तै आवश्यक र राम्रो लागि दैनिक आहार हटाउन।
आहार को मुख्य उद्देश्य
धेरै विरामीहरु के अस्थमा संग आहार सर्वश्रेष्ठ छ र यसको कार्यान्वयनको मुख्य लक्ष्य के हो आश्चर्य। ब्रोन्कियल अस्थमा छ को उपस्थिति मा आहार को मुख्य उद्देश्य:
फेफडों मा सुनिंनु कम;
को फोक्सो मा चयापचय प्रक्रियाहरू स्थिर;
ब्रोन्कियल spasms कम;
साथै, ठीक चुनिएको आहार आक्रमण ट्रिगरिङ, एलर्जी प्रतिक्रिया र allergens हटाउन कम गर्न मद्दत गर्छ।
अस्थमा विरामीहरु को आपूर्ति को आधारभूत सिद्धान्तहरू
भोजन विरामीहरु विशेष गरी छूट को अवधिमा एक, पूर्ण वैविध्यपूर्ण र सन्तुलित हुनुपर्छ। आहार ब्रोन्कियल अस्थमा आवश्यक, प्रोटीन को एक पर्याप्त रकम पशु मूल सहित हुनु पर्छ। मासु र उपभोग गर्न निश्चित हुनुहोस् माछा, दूध र दूध उत्पादन।
शरीर मा प्रोटिनको कमी श्वसन प्रणाली अवस्था, त्यसैले तिनीहरू एलर्जी छैन, विशेष गरी यदि पूर्ण, मासु र समुद्री त्याग्न कुनै आवश्यकता छैन को लागि खराब छ।
त्यहाँ पशु बोसो खपत केही सीमितता छन्, त्यसैले तपाईं यसलाई कम बोल्ड र एकाग्रचित्त थियो भनेर सूप माध्यमिक झोल खाना पकाउन गर्न आवश्यक छ। यस मामला मा, कुनै पनि डेयरी उत्पादन भने कुनै अन्य स्वास्थ्य समस्या र contraindications छन्, प्रतिबन्ध बिना खपत गर्न सकिन्छ।
यो मात्र होइन दैनिक आहार, तर आहार ध्यान महत्त्वपूर्ण छ। अस्थमा लागि मुख्य जोखिम कारक को एक पेट को stretching अत्यधिक हुन मानिन्छ, त्यसैले सानो अंश मा खाना खान गर्नुपर्छ पनि ज्यादा जोगिन आवश्यक छैन, र पेय खाने पछि केही घण्टा तरल पदार्थ। साथै पछिल्लो खाना सेवन,2घण्टा सुत्नेसमय अघि भन्दा कुनै पछि हुनुपर्छ।
अस्थमा लागि विशेष गरी आहार
तीव्र अस्थमा आक्रमण को मुख्य कारण जनावर शरीर मा विदेशी प्रोटीन को प्रवेश गर्न सकिन्छ। यो रोगी बोट खाना एउटा घृणाको छ भने पनि, पशु प्रोटीन प्रकार को सेवन सीमित गर्न यसकारण महत्त्वपूर्ण छ।
यो प्यूरिन मा खाना उच्च को खपत सीमित गर्न आवश्यक छ। यो विशेष गरी मसला, मसालेदार र अचाक्ली नूनिलो खाना को बहिष्करण implies जो एक exacerbation, समयमा, एक विशेष hypoallergenic आहार पालन गर्न महत्त्वपूर्ण छ।
त्यहाँ प्रत्येक रोगी लागि कडाई व्यक्तिगत चुनिएको छ किन छ जो hypoallergenic आहार, धेरै प्रकार छन्। कडाई मादक पेय को धूम्रपान र खपत contraindicated।
आहार ब्रोन्कियल अस्थमा अनाज र तरकारी को ठूलो परिमाणमा एक खपत implies। भाँडा ज्यादातर उसिनेर छन्, धमाकेदार र stewed। यो एकदम तातो र चिसो व्यञ्जन प्रयोग गर्न आवश्यक छैन।
म अस्थमा लागि के खान सक्नुहुन्छ
वयस्क र बच्चाहरु मा अस्थमा लागि आहार यो रोग को उपचार पूरा महत्त्वपूर्ण भाग हो। खाद्य खपत सन्तुलित र भिटामिन को एक ठूलो रकम समावेश गर्न छ। यदि contraindicated छैन यो दिन व्रत गर्नुपर्छ। यो breathlessness को आक्रमण हटाउनेछ प्राप्त गर्छ कि श्वसन प्रणाली को श्लेम लाग्एको झिल्ली को अवस्था सुधार गर्न मद्दत गर्नेछ।
ब्रोन्कियल अस्थमा मा खाना जस्तै उत्पादनहरु को लागि अनुमति:
मासु र माछा कम बोसो प्रजातिहरू;
तरकारी र फल;
कुनै contraindications हो भने, तपाईंले लगभग सबै उत्पादनहरु को र एक कम क्यालोरी आहार गर्न नै समय छडी मा सानो रकम प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। exacerbations उपस्थिति बिना तपाईं pectin र आहार फाइबर मा धनी खाद्य पदार्थ धेरै खानेकुरा उपभोग गर्न आवश्यक छ।
आक्रमणको घटना रोक्न र राज्य सुधार गर्न यस्तो उत्पादनहरु उपभोग गर्न आवश्यक:
अदुवा देखि चिया;
सन बीउ को decoction।
तपाईं भिटामिन र खनिज मा धनी खाद्य पदार्थ को ठूलो रकम खान आवश्यक छ।
के यो अस्थमा मा खान निषेध गरिएको छ
अस्थमा लागि आहार नै र आहार निश्चित उत्पादनहरु को बहिष्करण हो। यो अस्थमा मा यस्तो उत्पादन उपभोग गर्न अवांछनीय छ:
बोसो धनी शोरबा;
यो पनि यस्तो टमाटर, मासु, पनीर, अन्डा, पालुङ्गो रूपमा, histamine को उच्च स्तर संग खाद्य पदार्थ को सेवन सीमित गर्नुपर्छ। यी उत्पादनहरु उद्भव जो breathlessness को आक्रमण गर्न सक्छ, फेफडों र bronchi मा edematous प्रक्रियाहरू योगदान देखि लवण र शर्करा को प्रयोग, कडाई सीमित हुनु पर्दछ।
Hypoallergenic आहार अस्थमा लागि
ब्रोन्कियल अस्थमा लागि Hypoallergenic आहार आहार उत्पादन एक एलर्जी प्रतिक्रिया प्रोभोकिंग देखि बहिष्करण implies। साथै, ध्यान दिएर प्रमुख allergens गर्न प्रतिक्रिया को सुविधा मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ। यी उत्पादनहरू समावेश:
वयस्क मा आहार एलर्जी ब्रोन्कियल अस्थमा खातामा लिएर पकाएको छन् जो hypersensitive व्यक्तिगत उत्पादनहरू वा खाद्य पदार्थ, कडाई व्यक्तिगत आएको हुनुपर्छ। रोग को कुनै पनि प्रकटीकरण मा एक hypoallergenic आहार स्विच गर्न आवश्यक छ।
आहार ब्रोन्कियल अस्थमा एलर्जी आहार सबै नियमहरु र प्रतिबन्धको साथ एक सख्त अनुपालन द्वारा हालतमा। मात्र एक एलर्जी प्रतिक्रिया सुनेपछि जो उत्पादन, ठीक ज्ञात गर्दा आक्रमण समयमा लागू विशेष आहार आवश्यक छ।
के खाना allergens अस्थमा ट्रिगर गर्न सक्नुहुन्छ
यसलाई पालन गर्न धेरै महत्त्वपूर्ण छ चिकित्सकीय पोषण रोग को लक्षण बलियो जो अस्थमा अतिरिक्त खाना एलर्जी अवलोकन, को मामला मा। प्रत्येक रोगी लागि, आहार खातामा व्यक्तिगत खाना intolerances लिएर, अलग गरेको छ।
केही खाद्य पदार्थ गर्न घृणाको भएका विरामीहरु लागि, आहार उत्पादन आफ्नो दैनिक आहार देखि हटाइनु पर्छ के गर्न रूपमा सटीक निर्देशनहरू बनेको छ। साथै, एलर्जी केही पदार्थ, विशेष ट्रिगर गर्न सक्नुहुन्छ:
строгой, а рацион необходимо подбирать специалисту. एलर्जी आहार को कुनै पनि प्रकारको exacerbation समयमा अत्यन्तै कडा हुनुपर्छ र आहार एक विशेषज्ञ चयन गर्न आवश्यक छ।
छोराछोरीको अस्थमा लागि आहार
छोराछोरीको अस्थमा लागि आहार ध्यान खातामा जीव र contraindications को विशेषताहरु लिएर छलफल गर्नुपर्छ। बाल पोषण सन्तुलित र पूर्ण हुनुपर्छ। आहार फल, तरकारी, प्रोटीन, अनाज समावेश गर्नुपर्छ।
बच्चाहरु दैनिक धेरै उपभोग गर्नुपर्छ , म्याग्नेसियम मा धनी खाद्य पदार्थ को यो ब्रोन्कियल ट्यूब विस्तार र ऐंठन रोक्न मद्दत गर्छ भन्ने मात्र प्राकृतिक उत्पादन हो रूपमा। म्याग्नेसियम-धनी खाद्य पदार्थ जस्तै:
पत्तेदार हरी तरकारी;
बच्चा को आहार, अस्थमा देखि पीडित, यो मनमोहक यस्तो सामन टुना, सार्डिन, र माछा रूपमा तेल माछा को एक ठूलो राशि, विशेष समावेश छ। तिनीहरूलाई मा धनी खाद्य पदार्थ को दैनिक आहार मा समावेश गर्न अस्थमा, भिटामिन बी र सी को एक अपर्याप्त रकम भोगिरहेका, बच्चा को शरीर, त्यसैले यसलाई महत्त्वपूर्ण छ।
तीव्र बच्चा को अवधिमा यस खकार कम गर्न मद्दत गर्नेछ, पानी प्रशस्त र पतला प्राकृतिक फल को रस पिउन गर्न आवश्यक छ।
तालिका9अस्थमा №
आहार ब्रोन्कियल अस्थमा (तालिका № 9) लक्षण को उन्मूलन तिर निर्देशित र relapses रोक्न मद्दत गर्छ। यस्तो आहार पूर्ण पोषक र पोषक लागि सबै मानव आवश्यकता पूरा गर्न मद्दत गर्छ। सबै खाना, धमाकेदार गर्नुपर्छ सुखा वा उसिनेर।
जब एक आहार नम्बर9भोजन खपत गर्न सकिन्छ:
रोटी पीठो, भोजन वा चोकर;
कुनै पनि तरकारी र अनाज;
unsweetened फल र जामुन;
वनस्पति तेल र घिउ;
चिया, शोरबा नितम्ब, unsweetened रस, पानी।
आहार देखि पूर्ण तला खाना, रोटी, muffins र मिठाई र चिनी, कफी, कोका, मह, मीठो फल र जामुन, सिट्रस फल, फैटी मासु, धूम्रपान मासु, एकाग्रचित्त सूप पोसिलो, डिब्बाबंद खाद्य पदार्थ, अचार, मसला, रक्सी हटाउन आवश्यक छ।
एक आहार गर्न राखन, तपाईं चिरस्थायी छूट प्राप्त गर्न सक्छन् र एकदम स्वास्थ्य सुधार। तर, आहार रूढिवादी उपचार संयोजनमा नियुक्त गर्नुपर्छ। यो सबै भन्दा राम्रो परिणाम सुनिश्चित गर्नेछ।
Retrochorial hematoma: कारण, परिणाम र उपचार को तरिका
उपदंश कस्तो व्यवहार गर्ने? चिकित्सा को मूल सिद्धान्तहरू
के जोडना अन्तर्गत दाहिने तिर मा दुख्छ? हामी सिक्न!
Plenum कोठामा: मानक मोडेल सेट
स्थापना, प्रतिस्थापन, समीक्षा: लागि घर पानी फिल्टर। आफ्नो हातले पानी फिल्टर
रोमन Turgeneva "पिता र छोराहरू": सृष्टिको इतिहास। "पिता र छोराहरू": नायक
कसरी सोफा "मोनाको" ( "फर्नीचर को एक धेरै") निर्देशन र उत्पादन विवरण इकट्ठा गर्न
कसरी म फरक संस्करण मा शीर्षक पृष्ठबाट पृष्ठ नम्बर हटाउने वडा